I-Israel ivala izivakashi ezivela emazweni ayisikhombisa aseningizimu ne-Afrika
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » I-Israel Breaking News » I-Israel ivala izivakashi ezivela emazweni ayisikhombisa aseningizimu ne-Afrika
Ibhodi Yezokuvakasha yase-Afrika • Airlines • Airport • zezindiza • Izindaba ZaseBotswana • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Izindaba Zokubhebhana Eswatini • Izindaba zikaHulumeni • Health News • Industry Hospitality Industry • I-Israel Breaking News • Izindaba ZaseLesotho • IMozambique Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha zaseNamibia • Izindaba • Abantu • Unomthwalo wemfanelo • Ukuphepha • INingizimu Afrika Izindaba Ezintsha • Ezokuvakasha • Transportation • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje • Izindaba ZeZimbabwe
Ihhovisi likaNdunankulu wakwa-Israel limemezele namuhla ukuthi iNingizimu Afrika namanye amazwe ayisithupha ase-Afrika afakwe ohlwini lwakwa-Israel lwamazwe 'abomvu'.
Okuhlukile - okubizwa nge-B.1.1.529 - "kunenkanyezi engavamile kakhulu" yokuguqulwa kwezakhi zofuzo, okukhathazayo ngoba kungakusiza ukugwema ukusabela kwamasosha omzimba futhi kwenze kube lula, ososayensi batshele izintatheli esithangamini sabezindaba eNingizimu Afrika.
Kulandela umhlangano, obubanjwe nguNdunankulu we Israel UNaftali Bennett, amazwe ayisikhombisa ase-Afrika - Iningizimu Afrika, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Namibia kanye ne-Eswatini – afakwe ohlwini lwamazwe “abomvu”, noma amazwe ama-Israel angavunyelwe ukuya kuwo, ngaphandle uma ethola imvume ekhethekile evela kumnyango wezempilo wakwa-Israel.
Ama-Israyeli abuyela ekhaya evela kulawo mazwe kuzodingeka ukuthi achithe phakathi kwezinsuku eziyi-7-14 ehhotela elihlala yedwa ngemuva kokufika.
Izivakashi ezivela kulawa mazwe ase-Afrika ngeke zivunyelwe ukungena nazo kwa-Israel, kusho iHhovisi likaNdunankulu.
Israel iqophe amacala aqinisekisiwe ayizigidi eziyi-1.3 e-COVID-19 futhi angaphezu kuka-8,000 ashonile selokhu kwaqala lolu bhubhane.
NgokoMnyango Wezempilo wezwe, bangama-57% kuphela IsraelInani labantu abangu-9.4 million seligonywe ngokugcwele.